Jolay 30, 2018 Admin
Grika fitsarana ny extradite Alexander Vinnik an'i Rosia noho ny famotsiam-$ 4b amin'ny alalan'ny BTC-E
Ny fitsarana ao an-tanànan'i Thessaloniki grika no nanome ny faharoa fangatahana ny extradition ny olom-pirenena Rosiana Alexander Vinnik, fitoriana ny Rosiana Biraon'ny Fampanoavana. Ny mpisolovava Timofey hoy Musatov “Ny fitsarana no nitondra ny extradite Alexander Vinnik ho any Rosia.”
Vinnik efa voatazona ao Gresy tamin'ny 25 Jolay, 2017, noho ny fangatahan 'Amerikana manam-pahefana, fa mamaly azy amin'ny maro ny fahatafintohinana ao anatin'izany ny famotsiam $4 lavitrisa dolara amin'ny alalan'ny ankehitriny fahavelon'ny BTC-E fifanakalozana.
Aostraliana milaza fahombiazana banky ara-barotra ao amin'ny Global blockchain fitsarana
The Commonwealth Bank of Australia (CBA) nahavita ny miampita sisintany entana izay Nampiasa blockchain ahafahany manara-maso entany ao an-famatsian rojo. The iraisam-pirenena, iray amin'ireo Aostralia “Big Four” banky, nilaza fa 37,000 lbs ny vonin'ny amygdala no nalefa sambo avy tany Aostralia ho any Alemaina, & dia fantarina amin'ny alalan'ny sehatra tsy miankina mivelatra blockchain ny banky. Fandraisana anjara nodes ny blockchain tafiditra rafitra fototra antoko manamorona ny famatsian rojo, toy ny fambolena sy ny saham-boankazony mpamokatra Olam pitaovana mpilanja, ary koa ny seranan-tsambo ny terminal Patrick mpandraharaha sy ny Port of Melbourne.
Ny CBA hoy ny rafitra mifototra blockchain-mitahiry ny angon-drakitra ny kaontenera, antontan-taratasy sy ny fifanakalozana ara-bola amin'ny nozaraina tambajotra. Toy izany, mpiara-miasa hafa dia afaka mijery sy manara-maso miaraka vaovao momba ny fanondranana amin'ny tena-potoana - tahirin-kevitra ao anatin'izany ny fandefasana ny toerana, na ny mari-pana sy ny hamandoana ny kaontenera. Ny banky nilaza fa mikendry ny mandrakariva vola amin'ny blockchain & avy eo nilaza “Ity tahirin-kevitra dia nanome fari-mpiara-miasa ao amin'ny famatsiana amin'ny ambaratonga lehibe kokoa ny mangarahara sy ny fahombiazan'ny momba ny toerana, toe-piainana sy ny fanamarinana ny entana rehefa nentina.”
Hoy i Vaomieran'ny SEC Bitcoin no nifehy & matotra ampy ny manana ETF
Fotoana fohy taorian'ny SEC nandà ny Bitcoin fifanakalozana-varotra tahirim-bola (ETF) fampiharana fitoriana ny Winklevoss kambana Jolay 26, SEC Kaomisera Hester naneho ny fahadisoam-panantenany Peirce ny fanapahan-kevitry ny fahafahana misafidy mba mandà ny Bitcoin ETF. Nomarihiny fa Bitcoin, amin'ny maha-pananana, dia nifehy ary nitombo ampy mba ho mendrika ny US tsena. "Toa, Bitcoin Tsy masaka ampy, kaja ampy, na nifehy ampy mba ho mendrika ny tsena,"Hoy Peirce momba ofisialy dia namoaka fanambarana ampahibemaso mba hanaporofoana ny tsy fankasitrahana ny Winklevoss Bitcoin ETF.
Peirce aloha loatra koa fa ny fanapahan-kevitra ny hampihena ny SEC fiarovana mpampiasa vola amin'ny alalan'ny fandroahana ny institutionalization ny Bitcoin tsena, izay dia nahita fitomboana ny fananganan-jaza amin'ny alalan'ny voafehy ireo fikambanana ara-bola toy ny Goldman Sachs, JPMorgan sy Morgan Stanley nandritra ny volana maromaro. "Ankoatry ny, Izaho no miahiahy fa ny Vaomieran'ny manimba ny fomba fiarovana ny mpampiasa vola lehibe precluding institutionalization ny Bitcoin tsena. More rafitra fandraisana anjara dia manatsara ny Vaomieran'ny maro ny ahiahy sy ny tsena Bitcoin underlie ny tsy fankasitrahana izay mba,"Hoy Peirce.
TransferGo manampy cryptocurrencies amin'ny fahabetsahan'ny famindram-bola fampiharana
TransferGo, London-monina ny fanompoana fahabetsahan'ny famindram-bola, Lasa ny mpamatsy fahabetsahan'ny famindram-bola voalohany mba hanolotra ny varotra cryptocurrency service, ka manatitra Bitcoin, Litecoin sy ny hafa, Ho valin'ny fangatahana mafy ho an'ny cryptocurrency. Daumantas Dvilinskas, mpanorina sy Tale Jeneralin'ny TransferGo, niteny tamin'ny fitakiana mahery ho an'ny cryptocurrencies "Ny mpanjifa naniry izany.” TransferGo manana mihoatra noho ny 65,000 mpampiasa ary fanampiana 1,000 mpanjifa vaovao isan'andro.
Mihoatra ny 4,000 mpampiasa nanao sonia ho amin'ny fanompoana vaovao, izay manome fanohanana amin'ny fiteny fito, tamin'ny voalohany ora vitsy. Dvilinskas hoy mpanjifa dia tsy fandefasana cryptocurrencies ny havany any amin'ny firenen-kafa, fa ho mividy azy ireo noho ny fampiasana. hoy Dvilinskas “Amin'ny maha-sehatra, ry zareo eto ny hijanona, ary ho toy ny sehatra, tiantsika ny ho tena mora sy ny mpampiasa-namana lalana ho mpanjifa mba fidirana amin'ny ireo. "Hoy koa izy ny teknolojia Blockchain ho tonga fitaovana vaovao ho fifanakalozam-baovao ao amin'ny orinasa ara-bola.
Kraken Daily Market Report for 29.07.2018
KRAKEN DIGITAL pananana TAKALON'NY
$42.5M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao
Crypto Invest Summit: ny https://...
Aprily 23, 2019